Wall taịl emeputa
Home Information Other Pages Wall taịl emeputa
Edebere Ilex Ceramica na 2014, n'ihi njikọta nke ndị nwere uche anọ. Mụ na ndị otu obere na ndị ntorobịa, n'oge dị mkpirikpi oge Ilex Ceramica emeela aha na aha n'etiti taịl nile dị n'elu mgbidi Manufacturer na India. Ilex Ceramica dị na Rajkot, Gujarat na ọ bụ otu n’ime ndị na-ere ahịa na taịliki seramiiki. Anyị sere anyị ebe na-eduga adịchaghị mgbidi taịl Manufacturer si India.
Nzube na Innovation dị ka mgbidi ụwa si dị na ụkpụrụ na usoro.
Mgbidi taịl nile sitere na Ilex Ceramica sitere n'ike mmụọ nsọ. Ezubere taịl nile dị na kichin, ụlọ ịsa ahụ na-eke ime ụlọ ịsa ahụ ka ị mee, ị na-eche ihe dị iche ma nye echiche mara mma. Enwere ike itinye mgbidi taịlị anyị n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, ọfịs na kichin na ebe ndị ọzọ. Anyị nwere ọmarịcha mgbidi kachasị mma na usoro ntanetị na dijitalụ nke nwere ike ịkọwa mpaghara ime gị. Nwere ike ịhọrọ kacha mma maka mgbidi gị site na nchịkọta ịnakọta site na kenkowaputa, matt, satin, ugwu na taịl nile.
Ihe dị iche iche nke nchịkọta ọhụụ ephemeral dị na ntinye nke mmetụta dị iche iche dị iche iche na-emeghe mgbe ị na-abịaru mgbidi mgbidi seramiiki ma gbanwee dịka akụkụ nke ìhè ahụ si dị. Taịlị na usoro a bụ ihe a na-akpọ "ọhụụ na-agba ọsọ", o yiri ka ọ na-ebi ndụ ya. Anyị taịliki mgbidi taịl nile, 12x18 mgbidi taịl nile nwere ike etinyere na ime ụlọ ịwụ, oghere ọrụ na kichin na oghere ndị ọzọ. Anyị nwere taịlị mgbidi kachasị mma 12x18, taịlị mgbidi dị elu na 12x24 na usoro ntanetị na nke dijitalụ nwere ike ịkọwa mpaghara ime gị. Nwere ike ịhọrọ kacha mma maka mgbidi gị site na nchịkọta ịnakọta site na kenkowaputa, matt, satin, ugwu na taịl nile.
Ihe ịchọ mma dị na nchịkọta ahụ na-eme ka ụdị echiche dị iche iche mepụtara maka 12x24 mgbidi tile, na-emetụta ọ bụghị naanị anya ma metụkwa. N'ihi ya, n'elu tile na-aghọ mkpanaka n'ihi ọtụtụ mgbanwe. Na-emekọrịta uche dị iche iche nke onye ọrụ, ọ na-enye egwuregwu a na-agaghị echefu echefu nke ọkụ, ọdịdị na onyinyo. Oge ọ bụla ị nwere mmetụta na ị nwere ihe dị iche iche dị iche iche n'ihu gị. Ekwesiri ighota na enwere mmetuta a site na ihe omimi anya nwa oge.
Ihe ngosi ọhụụ ephemeral ọhụụ na-agụnye usoro atọ: ihe mpịachi na njirimara. Mgbe ị na-ekepụta ahịrị mpịachi, imewe chere na 12x24 seramiiki mgbidi taịlị na-etinyekarị n'elu na otu ibe, ruo ọtụtụ afọ ruo mgbe ọ dị mkpa ka edochi ha.
N'akụkụ nke mpịakọta ahụ, e nwere ihe osise okooko osisi "N'okpuru usoro mmiri", na nke ọzọ, a na-eji akwụkwọ e biri ebi chọọ ụgbọ elu yiri nke folds ahụ mma, dabara na agba ndị dị nro. Dị ka usoro nke usoro ndị gara aga, a na-egosipụta usoro ihe atụ nke Roses na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-aga n'ihu na ntọala siri ike, nke a na-eme ka ọ bụrụ usoro ihe osise mmanụ. Ọdịdị nke elu na-emepụta ọdịiche dị mkpa: okpukpu dị nro n'otu akụkụ na enyemaka, kpuchie ya na isi nke iko transperent, na nke ọzọ.
A na-eji ọla edo na-acha ọla edo edozi, ejiri ọla edo na-acha ọla edo, nke etinyere site na spraying spraying. The ezigbo kenkowaputa imecha n'otu akụkụ nke mgbidi taịl nile na n'akụkụ nke ọzọ na-mara mma enwekwukwa site a uka nke doro anya iko na a siri ike, matte mmetụta. Ngwunye ọlaọcha bụ ihe nchacha ihe eji agba ọla ọcha. Otu akụkụ nke ihe ụtọ na-eji ire ụtọ ma na-egbukepụ egbukepụ na-akwado nke ọzọ, na-eme ihe ike matte nke a na-ahụ anya iko.
Iji dozie enweghị ike site na echiche mara mma, a họọrọ nhazi nke folds, na -emepụta ihu igwe na enyemaka, yana mmetụta abụọ dabere na mmekọrịta nke agba na ụdị ederede nke na-eme ka onye na-ekiri ya na-eru nso. Fold na ọtụtụ ugboro ugboro ha na-etolite elu volumetric, ebe a na-ahụta ìhè na onyinyo ebe ọzọ. Dabere na ụkpụrụ a, e kere ụdị anọ nke usoro mpịachi usoro: mpịachi ọla edo, ịgbakọ ọlaọcha, ịkpụkọta okooko osisi na mpịachi Roses. Ihe nlereanya ọ bụla na-emetụta onye na-ekiri ya dabere na ọnọdụ ya: nghọta ọ bụghị naanị na-agbanwe agba na udidi kamakwa ọdịdị nke ihe ahụ.
Anyị Ceramic Wall Taịl Mkpokọta:
Lee ị nwere ike ịlele nchịkọta nke ngwaahịa taịl nile anyị. Lelee taịlị mgbidi anyị dị na ụdị dị iche iche dị iche iche, imecha, nha na agba. N'ihi Ex: 300X450MM Kenkowaputa mgbidi taịl nile, 300X600 MM mgbidi taịl, wdg.